DOWNLOAD F-16 Miady amin'ny Falcon FSX & P3D - Rikoooo
F-16 Mitolona Falcón FSX & P3D
Downloads 63 926
Mpanoratra: Kirk Olsson
Fanampin-javatra mahagaga niova fo hiasa tsara FSX ary P3D, modely nataon'i Kirk Olsson fa mahavariana. Ity modely (Viper) ity dia misy endrika modely 22 sy modely 4. Ny fiantraikan'ny Afterburner sy ny ampahany mihetsiketsika dia misy, feo mahazatra, refy, cockpit virtoaly, HUD, 2D Panel.
Ny General fanetsiketsehana F-16 Ady Falcon dia multirole mpiady mivoatra ny Etazonia nandritra ny 1970s Voalamina mahery 20 firenena, naorina teo ambany fahazoan-dalana any Torkia, Korea Atsimo ary ny vondrona efatra firenena OTAN F-16 in 2013 dia ny mpiady ampiasaina indrindra eto amin'izao tontolo izao, araka ny Tombanana, 2,309 fiaramanidina eo amin'ny fanompoana ao amin'ny 2012 na 15% ny ady rehetra eto amin'izao tontolo izao fiaramanidina. 4 500th dika mitovy natolotra tamin'ny Aprily 2012 sy ny famokarana dia antenaina mba hanohy, fara fahakeliny, mandra-pahatongan'ny 2017 ho an'ny fanondranana. (Wikipedia)
Quick ny fiaramanidina:
1. Tanteraka maneho mikopaka (F8).
2. Mampihetsika fijanonana novakiny ka manosika throttle ho feno hery. Mihazona novakiny for 2-3 segondra (mba hanangana fahefana).
3. Hamotsotra novakiny sy hanodinana ny amin'ny 125-135 fatotra.
1. Mampihena ny hafainganam-pandeha mba 340 fatotra amin'ny airbrake (/).
2. Hanitatra mikopaka ho feno (F8). Amboary ny hafainganam-pandeha amin'ny throttle sy airbrake ny hijanona amin'ny hisosa hantsana.
3. Fomba Fiasa fiaingana manodidina 200 fatotra.
4. Taloha kelin'ny ny fiaingana amin'ny tokony ho 165 fatotra manitatra airbrake (/), dity orona ny
ary hampitombo throttle hampihena taranaka.
5. Hetezo throttle sy touchdown eo 145-155 fatotra.
6. Tazony tsara orona dity mandra-hafainganam-pandeha efa nihena ho eo 130-140 fatotra.
Ary tsikelikely hampidina ny orona sy mampihatra notapahiny teo 100-120 fatotra.
Lockheed Martin C-130J-30 ho an'ny FSX